Madaxweynaha Puntland Oo Magaalada Boosaaso Uga Dhawaaqaya Musharaxnimadiisa. – Idil News
Madaxweynaha Puntland Oo Magaalada Boosaaso Uga Dhawaaqaya Musharaxnimadiisa.
GAROOWE(IDIL NEWS)-Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas, ayaa la filayaa in Maalmaha soo socda uu ku dhawaaqo inuu yahay Musharax u taagan inuu sii Hoggaansho Puntland 5 Sano ee soo Socota.
Warar ay heshay Shabakadda Idil News, ayaa Sheegaya in Madaxweynaha Puntland uu Masharaxnimadiisa ku dhawaaqi doono Todobaadkan Gudihiisa, Iyadoo Ilaha Qaarkood ay inoo sheegeen in uu Shaacinayo 5-ta Bishan oo ku Beegan Maalinimada Arbacada ah.
Wararka ayaa intaas ku daraya in Madaxweynuhu uga dhawaaqayo Musharaxnimadiisa Magaalada Boosaaso ee Xarunta Ganacsiga Puntland, Iyadoona ay si hoose u socoto Qaban-qaabada Munaasabadda ku dhawaaqista Musharaxnimada Madaxweyne Gaas.
Madaxweynaha Puntland ayaa lagu wadaa in inta uu ku dhawaaqin Musharaxnimadiisa uu Shaaciyo Guddiga Ansixiinta iyo Xalinta Khilaafka Baarlamaanka, kuwaas oo la filayo inuu ku dhawaaqo Saacadaha nagu soo Fooda leh.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas, ayaa la Filayaa in Munaasabadda uu ku Shaacinayo Musharaxnimadiisa Markii labaad, uu ku soo Bandhigo Guulihii ay gaartay Xukuumadiisa Mudadii 5 Sano aheyd ee ay jirtay iyo Caqabidihii ka hor-yimid, Isagoona halkaas ka cadeyn doona Barnaamij Siyasadeedkiisa hadii uu Mar labaad ku Guuleysto Hoggaanka Puntland.
Shacabka Puntland ayaa Muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn isku weydiinayay in Madaxweynaha Dowladda Puntland uu yahay Musharax 5-ta Sano ee soo Socota iyo inuu isaga harayo Loolanka, maadama Deegaanada Puntland ay ka socdaan Olale ay Wadaan Musharixiinta u Hanqal taagaysa inay Fariistaan Guriga looga Arrimiyo Mandiqada Puntland.